बूढानीलकण्ठजस्तो समावेशी दोस्रो विद्यालय छैन
२०७६ जेठ १९ आइतबार ०६:३९:००
बूढानीलकण्ठ स्कुल देशको एउटामात्रै यस्तो विद्यालय हो जसले मजस्तो तराईको सानो गाउँको कृषक परिवारको छोरालाई कुनै भेदभाव नगरी राष्ट्रियअन्तर्राष्ट्रिय अवसरको ढोका खोलिदियो । काठमाडौंमा मेरो पहिलो घर नै बूढानीलकण्ठ स्कुल हो जहाँ सबैलाई समान व्यवहार र अवसर प्रदान गरिन्थ्यो । अहिले पनि गरिन्छ ।
यस राष्ट्रिय विद्यालयले देशको सबै भूगोल (हिमाल, पहाड र तराई) तथा आर्थिक हिसाबले सम्पन्न वा विपन्न (पूर्ण छात्रवृत्ति, अर्ध छात्रवृत्ति र सशुल्क) लाई समान अवसर दिएको छ । सबै जिल्लाका विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व यस विद्यालयमा हुने गर्छ । विभिन्न जातजाति, शासक र शासित सबैखाले विद्यार्थीले यस विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अवसर पाउँछन् । यहाँ सबैलाई समान अवसर प्रदान गरिन्छ ।
किन महत्त्वपूर्ण छ बूढानीलकण्ठ स्कुल ?
देशमा भएको राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन र त्यसले ल्याएको विकासको नयाँ अवधारणामा यस्तो दोस्रो विद्यालयको न त परिकल्पना नै भएको छ न त यस्तो समावेशी शैक्षिक अवधारणा बनाउन नै सकिएको छ । यस्ता सफल परियोजनामा विकासे संस्था र दातृ निकायको समेत रुचि छैन । आजको दिनमा त यस्तो समावेशी संस्थाले आफ्नो उद्देश्यबाट नै विचलित हुने हो कि भन्ने डर पैदा भएको छ ।
यस विद्यालयमा हुने राजनीतिकरणले ग्रामीण नेपाली बालबालिकाको शिक्षा र क्षमतावान विद्यार्थीले समान अवसर पाउने अधिकारलाई वञ्चित गर्छ भने त्यो देशको लागि धेरै ठूलो क्षति हो । यस विद्यालयका अधिकांश विद्यार्थी नेपालमा बसेर काम गरिदिएको भएमात्रै पनि नेपालमा धेरै परिवर्तन आउने थियो र आज देश अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रो हैसियतमा हुने थियो ।
यही विद्यालयले मलाई गाउँदेखि राजधानीसम्म ल्यायो । यस विद्यालयको स्थापित मान्यता र लक्ष्यलाई बचाउन मैले गाउँ नै फर्किनु पर्ने अवस्था आयो भने सायद त्यो आफैँमा सुखद् हुनेछ । यो अभियान देशको र आगामी पुस्ताको भविष्यको लागि हो ।
हाम्रो जीवनमा समानता र समावेशीताको मूल्यमान्यता सिकाउने मेरो विद्यालयलाई मनैबाट नमन गर्न चाहन्छु । आजको घडीमा हामी सबै यस विद्यालयप्रति कृतज्ञ बनौ । यस अभियानमा साथ दिऔँ ।
सानो कृषकको छोरालाई अवसरको ढोका
मलाई अहिले पनि राम्रोसँग याद छ । जनकपुरमा पढ्दै थिएँ म । काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ स्कुलको बारेमा सुनेको थिएँ र आफू पनि बूढानीलकण्ठ स्कुलमा पढ्ने अठोट गरेको थिएँ । तर, म पढ्ने स्कुलको प्रधानाध्यापक मेरोविरुद्ध उभिनुभयो । सिंगो कक्षाको अगाडि मलाई बूढानीलकण्ठ स्कुलमा मेरो भर्ना रोकिदिने घोषणा गरिदिनुभयो र त्यसको लागि जे पनि गर्न तयार रहेको कुरा गर्नुभयो । मेरो उमेर नौ दश वर्षको मात्र थियो । प्रधानाध्यापकको त्यस व्यवहारले गर्दा जसरी पनि बूढानीलकण्ठ स्कुलमा भर्ना भएर देखाउने प्रण गरेँ मैले ।
बूढानीलकण्ठ स्कुलको प्रवेश परीक्षामा दुई पटक पास पनि भएँ तर जनकपुरमा मैले पढेको स्कुलको प्रअले कागजात बिगारेर पठाउँदा भर्ना भने हुन पाइनँ । केही वर्षपछि कक्षा ७ को लागि फेरि भर्ना तयारी गरेँ र प्रवेश परीक्षा दिएँ । त्यतिबेलासम्म केही परिपक्व भइसकेको थिएँ, त्यसैले म आफैँले कागजात राम्रोसँग हेरेको थिएँ । तेस्रो प्रयासमा मलाई कसैले रोक्न सकेन । अन्ततः म बूढानीलकण्ठ स्कुलमा भर्ना हुन सफल भएँ ।
म बूढानीलकण्ठ स्कुलमा २०४९ साल वैशाखमा भर्ना भएर २०५६ पुसमा पासआउट भएको थिएँ । म सोही स्कुलको पूर्व विद्यार्थी भएको र उक्त स्कुल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय गौरवको शैक्षिक संस्था भएकाले सार्वजनिक हितको लागि सूचना माग गरेको हुँ ।
सूचना आयोगमा पुनरावेदन
देशकै प्रतिष्ठित तथा देशभरका विद्यार्थी अध्ययन गर्ने बूढानीलकण्ठ स्कुलको प्रधानाध्यापक (प्रिन्सिपल) छनोट पारदर्शी नभएको र राजनीतिक चलखेल भएकोले एक पूर्व विद्यार्थीको हैसियतले मैले प्रिन्सिपल छनोट प्रक्रियाको जानकारी माग गर्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छु ।
उक्त सूचना माग गरी शिक्षा मन्त्रालय र बूढानीलकण्ठ स्कुलमा नेपालको संविधानको धारा २७ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ र ७ को उपयोग गर्दै निवेदन पेस गरेकोमा कानुनले तोकेको समयावधि (२१ दिन) मा सूचना उपलब्ध नगराइएकोले मैले आयोगबाट आदेशको माग गरेको हुँ ।
नागरिकले कुनै पनि सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा मागेको सूचना सम्बन्धित निकाय वा कार्यालयले कानुनले तोकिएको समयभित्र उपलब्ध नगराएको खण्डमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
बूढानीलकण्ठ स्कूलको २०७६ वैशाख १७ गते घोषणा भएको प्रधानाध्यापक छनोटमा सहभागी सम्पूर्ण निवेदकहरूको प्रारम्भिक चरणदेखि नतिजा घोषणासम्मको प्राप्ताङ्क, निवेदकहरूले दिएको प्रस्तुतीकरण, उहाँहरूले हासिल गरेको स्थान (नतिजा) तथा छनोट विधि र प्रक्रियाको प्रतिलिपि र आवेदकहरूले हासिल गरेको प्राप्ताङ्क र नतिजाको आधार मैले माग गरेको छु ।
मैले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा वैशाख १९ गते सूचनाको हक प्रयोग गर्दै सूचना माग गरेको थिएँ । मन्त्रालयले वैशाख २० गते पत्र जारी गर्दै उक्त सूचना बूढानीलकण्ठ स्कुलमा रहेको जानकारी गराएको थियो । मन्त्रालयको पत्रको बोधार्थ स्कुललाई पनि दिइएको थियो । त्यसपश्चात् मैले २०७६ जेठ जेठ ७ गते बूढानीलकण्ठ स्कुल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमक्ष सूचना माग गर्दै पुनरावेदन गरेको थिएँ । बूढानीलकण्ठ स्कूलबाट त्यसको सात दिनभित्र सूचना उपलब्ध हुनुपर्नेमा दश दिनभित्र पनि सूचना उपलब्ध नगराइएकोले आयोग समक्ष निवेदन दिएको हुँ ।
स्कूलको जमीनमाथि प्रधानमंत्रीको प्रश्न
२०७६ वैशाख १७ गते ५ वर्षका लागि बूढानिलकण्ठ स्कुलको प्रधानाध्यापक छनोट भएकोमा त्यसको एक साता नबित्दै २०७६ वैशाख २४ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्मानित संसदमा ५७० रोपनी जमिन र ५ करोड रुपैयाँ एउटा स्कुललाई किन दिने भन्दै प्रश्न उठाउनुभएको छ ।
साथै उहाँले बूढानीलकण्ठ स्कुलको विद्यार्थी छनोट प्रक्रियामा पनि प्रश्न गर्नुभएको छ । देशभरका हजारौं सामुदायिक विद्यालयमध्ये प्रधानमन्त्रीले एउटाको मात्रै नाम लिनु संयोगमात्रै नहोला कि !
(बूढानिलकण्ठ स्कुलका पूर्व विद्यार्थी )